Fadeexad hareereysay CIA-da mareykanka oo ku aadan ciqaab ay marsiiyeen rag al-Qacida ka tirsan - iftineducation.com
Fadeexad hareereysay CIA-da mareykanka oo ku aadan ciqaab ay marsiiyeen rag al-Qacida ka tirsan
aadan21 / December 10, 2014
iftineducation.com – Warbixin ay soo saareen senetka Mareykan ayaa si xoog leh loogu dhaleeceeyay habka khilaafka ka taagan yahay ee su’aalo weydiinta ee CIA-da, iyagoo ku tilmaamay cadawtinimo aan wax tarlaheyn.
Dianne Feinstein oo guddoomineysa guddiga sirdoonka ee Senatka ayaa sheegtay in xaaladaha qaar sida loola dhaqmay maxaabiista ay jirdil aheyd.
Warbixinta ayaa sheegeysa in aysan sinaba ku keenin sir muhiim ah oo ku saabsan qatar dhaw oo ka timaada xagjiriinta habka su’aalo weydiinta ee la soo saaray kadib weeraradii 11kii September ee sanadkii 2001kii.
Dadka looga shakiyay argagixisanimada ayaa hurdada loo diday ilaa 180 saacadood, iyagoo la sharaf riday oo la garaacay, laguna haayay meelo xanuun badan.
Senetrada ayaa sheegay in maamulka CIA-da ee barnaamijka ay aad u qaldanaayeen iyo heyadda oo dadka siisay warbixin qaladan.
DAAWO: Muqaal Naxdin Leh Qaabkii xalay Weerarka Hotel Banaroma
Daawo video: “Naaska haddii leyga taabto kacsi waalli ah ayaan dareemaaa”